တစ်ပူဖောင်း၌ခရီးသွားလာ | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ
လူသားသည်ပျံသန်းရန်အမြဲတမ်းလိုချင်ခဲ့သည်၊ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကံကောင်းကြောင်းဤအချိန်များသည်ထိုသဘောဖြင့်အတော်လေးကောင်းသည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ လေယာဉ်များ၊ အာကာသယာဉ်များ၊ ရဟတ်ယာဉ်များနှင့်ထူးဆန်း။ အန္တရာယ်ရှိသောအားကစားများပင်လျှင်လေယာဉ်စီးအားပျော့ရန်အတွက်လင်းနို့ကဲ့သို့အထူးဝတ်စုံဖြင့်လေယာဉ်ပေါ်မှခုန်ထွက်နိုင်သည်။ ရပါတယ်
သို့သော်သံသယမရှိဘဲအကောင်းဆုံးနှင့်အပြည့်အဝပျော့ပျောင်းသောလေယာဉ်ခရီးစဉ်များထဲမှတစ်ခုက၎င်းမှစီစဉ်ထားသည် ပူပြင်းတဲ့လေပူဖောင်းများ။ သငျသညျအစဉျအမွဲတ ဦး တည်းပျံသန်းဖူးပါသလား ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်၎င်းသည်ခရီးသွားများအတွက်ကမ်းလှမ်းသောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဒီစိတ်ကူးယဉ်ခရီးအကြောင်းအနည်းငယ်လေ့လာကြပါစို့။
ပျံတတ်သောပူဖောင်း၏အခြေခံအယူအဆမှာဖြစ်သည် မြင့်တက်လေ့သောပူသောလေထု။ ဤအရာသည် Archimedes မှပြောကြားခဲ့သည်မှာသူက "ခန္ဓာကိုယ်ကအနားယူနေတဲ့အရည်ထဲကိုလုံးဝဒါမှမဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနစ်မြုပ်နေတဲ့ဒေါင်လိုက်အထက်ပိုင်းတွန်းကန်အားဟာ dislodged fluid ရဲ့အလေးချိန်နဲ့ညီမျှတယ်။ ဒါဟာ hydrostatic တွန်းကန်အားဏဖြစ်ပါတယ် Archimedes 'နိယာမ, နှင့်ညီမျှခြင်းအတွက်ပူလေကြောင်းပူဖောင်းစဉ်းစားလျှင်, လေအရည်ဖြစ်ပါတယ်။
ပူဖောင်းတစ်လုံးမှာအောက်ခြေတွင်အပေါက်တစ်ပေါက်ရှိပြီးဖယောင်းတိုင်သို့မဟုတ်အပူအရင်းအမြစ်ရှိသည့်ပူဖောင်းတစ်ခုပါ ၀ င်သောပူပြင်းသောလေထုတစ်ခုပါရှိသည်၊ အလှည့်အနေဖြင့်၊ ကြိုးနှင့်၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ပရိုပိန်းဓာတ်ငွေ့ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
ထိုအခါလူများကိုသယ်ဆောင်သည့်ခြင်းတောင်းရှိသည်။ သတိရပါ ပူဖောင်းများတွင် propellant ကင်းမဲ့သည် ၎င်းတို့ကိုလေစီးကြောင်းများဖြင့်သာသယ်ဆောင်သွားနိုင်သည် burner ညှိခြင်းဖြင့်အမြင့်ကိုမြှင့်သို့မဟုတ်လျှော့ချပါ.
ကတူပုံရသည် လေပူဖောင်းများ၏မူလအစသည် ၁၈ ရာစုအစတွင်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးဘရာဇီးဘုန်းတော်ကြီး de Gusmao နှင့် Montgolfier ညီအစ်ကိုများပြင်သစ်လူမျိုးများလက်၏အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ရာစုနှစ်များစွာကြာပြီးနောက် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်ဆွစ်လူမျိုးတစ် ဦး နှင့်ဗြိတိန်လူမျိုး၊ Piccard နှင့်ဂျုံးစ်တို့သည် ၁၉ ရက်နှင့် ၂၁ နာရီအတွင်းကမ္ဘာပေါ်တွင်မရပ်မနားဘဲပူဖောင်းတွင်ပထမဆုံးသွားလာခဲ့ကြသည်။
ဒီနေ့ပူဖောင်းပေါ်မှာပျံသန်းလိုက်ပါ ဒါကခရီးသွား pleasure ည့်သည်အပျော်ဖြစ်သည်လှပသောရှုခင်းများထောက်ပံ့ပေးသောပြည်ကိုချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်းစေသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိပူဖောင်းတစ်လုံးတွင်သင်လက်တွေ့ကျကျပျံသန်းနိုင်သည်။ ကမ်းလှမ်းမှု၊ လှပသောရှုခင်းများနှင့်ခရီးသွား makes ည့်သည်များပြုလုပ်သည့်ခရီးသွားကုမ္ပဏီတစ်ခုလိုအပ်သည်။
ဥရောပမှာလူကြိုက်များတဲ့ပွဲတစ်ခုလည်းရှိတယ် ဥရောပလေပူဖောင်းပွဲတော်စပိန်နှင့်တိုက်ကြီး၏တောင်ဘက်တွင်အလွန်လူကြိုက်များသည်။ ငါ့မှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ် Igualada, ဘာစီလိုနာပြီးတော့သူမအမြဲသွားပြီးတကယ့်ကိုလှပတဲ့ဓာတ်ပုံအချို့ကိုယူတယ်။ ဤပွဲတော်သည်များသောအားဖြင့်ကျင်းပလေ့ရှိသည် ဇူလိုင်၊ နွေရာသီယခုအချိန်အထိကပ်ရောဂါနှင့်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုယခုထိမသိရှိရသေးပါ။
Igualada ပွဲတော် ကြာသပတေးနေ့မှတနင်္ဂနွေအထိလေးရက်ကြာသည်၎င်းသည် Avenida de Catalunya ၏လေယာဉ်ကွင်းပေါ်တွင်ရှိသည်။ ထိုနေ့ရက်ကာလအတွင်းရှိပါတယ် ပူဖောင်းပြိုင်ဆိုင်မှု, ပြပွဲ, လေယာဉ်ခရီးစဉ် နှင့်ညမှာaညအလင်းရောင် အဆိုပါပူဖောင်းများလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုတက်သွားနှင့်နေဝင်ချိန်ပြီးနောက် burners တွေကိုပိတ်ထား။ အဖိုးတန် လေယာဉ်များသည်နံနက်စောစောနှင့်မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာထိုနှစ်လုံးသည်ပူဖောင်းထဲတွင်ပျံသန်းရန်အကောင်းဆုံးသောအချိန်များဖြစ်သည်။
ပွဲတော်သွားသူများလည်းပျံသန်းနိုင်သည်၊ သို့သော်စာအုပ်ကိုအမြဲတမ်းဖတ်ရန်အကြံပြုလိုသည်။ Igualada ကိုသွားလည်ရန်အလွန်တကယ့်ကိုလှပသောအချိန်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မြို့လယ်ခေါင်တွင်ဆက်နွယ်သောလှုပ်ရှားမှုများ၊ ယဉ်ကျေးမှုများစွာရှိသည်။ လေယာဉ်မှူးများနှင့်ပူဖောင်းများသည်ကမ္ဘာအနှံ့မှရောက်ရှိလာသည် နှင့်စိန်ခေါ်မှုနှင့်ပျော်စရာတည်းဖြတ်မှုများရှိပါတယ်။ ယခုနှစ်တွင်၎င်းကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်း။ မရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းပြန်လာမည်မှာသေချာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သွားရမည်။
မမေ့နိုင်သောပူလေကြောင်းခရီးစဉ်များကမ်းလှမ်းသောခရီးသွား some ည့်နေရာများရှိသည်။ ဥပမာ, တူရကီ၌ Cappadocia။ ကုမ္ပဏီတော်တော်များများရှိတယ်။ ခရီးစဉ်ကဂန္ထဝင်ဆန်တယ်။ သူတို့ကမင်းကိုဟိုတယ်မှာခေါ်သွားတယ်၊ လေယာဉ်ကွင်းကိုစောစောစီးစီးသွားကြတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်မွန်းလွဲပိုင်းမွန်းလွဲပိုင်းမှာလေယာဉ်ပျံတက်တယ်။ လက်မှတ်ထိုးတာ၊
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာငါတို့ပြောခဲ့တယ် Bangar, မြန်မာနိုင်ငံ။ လေထဲမှာပျံသန်းဖို့နောက်ထပ်အံ့သြစရာတစ်ခုကတော့ ဤကိစ္စတွင်ဘုရားကျောင်းနှင့်အိမ်များသို့လှိုဏ်ဂူများနှင့်အဖြူရောင်အထွတ်အထိပ်များရှိသော karst ရှုခင်းအစားကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည် ဘုရားကျောင်းနှင့် stupas အစိမ်းနှင့်အနီအကြားရှုခင်းတစ်ခုတွင်အာရှအမျိုးသမီးများ။ ပိတ် ကမ္ဘောဒီးယားတွင် Angkor Vat တွင်လေယာဉ်များရှိသည်.
အကယ်၍ သင်သည်အာဖရိကလေကိုနှစ်သက်လျှင်အကောင်းဆုံးသောကုလားကာသည်ပူဖောင်းဖြစ်သည်၊ Serengeti အမျိုးသားဥယျာဉ်, တန်ဇန်းနီးယား။ ကျယ်ပြန့်ကျော်လွန်ပြီး အာဖရိကဆာဗားနားa ကိုခံစားရန်တစ်မူထူးခြားသောအမြင်ဖြစ်ပါတယ် ရိုင်းသောဘဝ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ National Geographic ကိုကြည့်တာပေါ့။
Brothers Grimm ၏ရဲတိုက်များနှင့်ရှုခင်းများကိုကြည့်ရှုရန် Loire ချိုင့်, ပြင်သစ်။ တစ်ချိန်ကထက်ပို 300 ရှိခဲ့သည် ရဲတိုက် ယနေ့ခေတ်တွင်များများစားစားမရှိသလောက်ဖြစ်သော်လည်းအခြားခေတ်မှရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များလည်းရှိနေသည်။ ၎င်းအပြင်တောင်များ၊ သစ်တောများ၊ ဥယျာဉ်များနှင့်စပျစ်ဥယျာဉ်များနှင့်လည်းပေါင်းစပ်ထားသည် အလယ်ခေတ်ကျေးရွာများ ပို့စကတ်မှထွက်ပေါက်များ
တလျှောက် တရုတ်ပြည်ရှိ Li မြစ်သငျသညျအနီးရှိ karst ဖွဲ့စည်းမှုမြင်လိမ့်မည် Guilin နှင့် Yangshuo ဤရှုခင်းများသည်လှပပြီးရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးများအပြင်တရုတ်ရိုးရာပန်းချီကားများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ သင်သည်ထိုဒေသသို့လှေဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သော်လည်းမှန်သောလေပူဖောင်းများမှာအလွန်ကောင်းမွန်သည်။
မက္ကဆီကိုရှိ Teotihuacan, ဒါဟာမြင့်သောအနေဖြင့်မြင်အခြားအံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ The ပိရမစ်များ ၎င်းတို့သည်အခြားကမ္ဘာတစ်ခုမှလှပသောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှဟောင်းနွမ်းသောအနာဂတ်များထက် ပို၍ ပုံရသည်။ ဤခရီးစဉ်များထဲမှတစ်ခုကိုငှားရန်မက္ကဆီကိုစီးတီး၌သင်သာမေးမြန်းရမည်။
အမေရိကန် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကမ်းလှမ်းမှုလည်းရှိသည်။ ၎င်းသည်လှပသောရှုခင်းများနှင့်ပြည့်စုံသည့်isရာမနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည် Utah ရှိ Napa ချိုင့်ဝှမ်းသို့မဟုတ် Monument Valley ကိုကျော်ပျံသန်း, ရုပ်ရှင်ထဲတွင်တွေ့မြင်ဂန္ရှုခင်း သဲလျမာနဲ့ Louise o ဖောရက်စ Gump: ချောက်ကြီးများ၊ ကျောက်ဆောင်များ၊။ မင်းဒီလောက်ဝေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလား? ကောင်းပြီ နယူးယောက်၌တည်၏ လှပသောရေတံခွန်များနှင့်အတူ Genesee မြစ်နှင့်၎င်း၏ချောက်ကြီးပေါ်တွင်ပျံသန်းမှုများရှိသည်။ မေလအတွက်အကောင်းဆုံးဖေါ်ပြခြင်း။
နောက်ဆုံးတော့ရှေးဟောင်းမြေများ အီဂျစ်နှင့်ဂျော်ဒန်။ အဲဂုတ္တုပြည်၌ကျော်ပျံသန်း King's Valley ပျောက်ဆုံးမရနိုင်အရာဖြစ်တယ်။ အီဂျစ်သည်စွန့်စားလိုသောဆန္ဒနှင့်နက်နဲသောနက်နဲသောအရာဖြစ်ပေသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်း၏ပုခက်ဖြစ်သည်။ Thebes၊ Nile, Luxor၊ Queen Hatshepsut ၏ရင်ခွဲရုံဘုရားကျောင်း၊ Ramses II နှင့် III ဘုရားကျောင်း... ပြီးတော့ဂျော်ဒန်မှာ Wadi Rum နယ်မြေကနောက်တစ်ခု။
သင်မြင်သည့်အတိုင်းသင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာ၌မဆိုလက်တွေ့ကျကျလေပူလေယာဉ်ဖြင့်ပျံသန်းလိုလျှင်သို့မဟုတ်ပျံလိုလျှင်သင်လုပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါရှုခင်းကွဲပြားလိမ့်မည်, အဘယ်အရာကိုမျှ။ ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်မှာအမှတ်စဉ်ကုမ္ပဏီများနှင့်တာဝန်ရှိသူများအကြောင်းကိုမေးမြန်းရန်ဖြစ်သည် လုံခြုံရေး။ မတော်တဆမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ အခုအီဂျစ်နိုင်ငံမှာခရီးသွား remember ည့်သည်များစွာသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အံ့သြဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာကသတိထားပြီးဘာမှမငှားရမ်းဖို့ပါ။ ကြွင်းသောအရာသည်ပျော်မွေ့ရန်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ » ပူဖောင်း